Nkume Nkịta Nkịta Ngwongwo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Nkume Nkịta Nkịta Ngwongwo - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Nkume Nkịta Nkịta Ngwongwo)
Nkume Ugbo Nkume
Nkọwapụta ngwaahịa Ugbo Nkuku Na- ekpochapu Nkuku nwere Nchapu mmiri, amphibious. Enwere ike ịgbachi agba, dị mfe ihichapụ ebe dị ọcha. Debe ụdọ ike, gbochie anụ ma ọ bụ dọta ya. Ọ bụ ihe kacha mma anụ ọkụ kpo oku mkpuchi ngwaahịa. Ojiji zuru oke: enwere ike iji ya kpoo anụ ahụ, kpoo na nkịta dị ọkụ, mmiri ọkụ mmiri,...
Ngwongwo Ugbo Ala
Ngwongwo Ugbo Ala Igwe ala a na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe dị iche iche dị mfe iji rụọ ọrụ ma nye gị ụlọ ọkụ dị oké ọnụ ahịa n'ebe ọ bụla n'ụlọ gị. Ụlọ ala anyị na-ekpo ọkụ na-adị mfe iji wụnye ma jiri ya mee ka ọkụ dị ọkụ, ma ọ bụ usoro ọkụ ọkụ zuru oke, n'ime ụdị ụlọ ọ bụla. Ụlọ a na-ekpo ọkụ na-emepụta...
Nkọwapụta ngwaahịa Ihe mgbochi anyị na - ekpo ọkụ na - enye mkpụrụ osisi ahụ maka ịmị mkpụrụ na ngwa ngwa .N'ihi na nke kacha mma, anyị na - atụ aro ka mkpụrụ ịmalite tray na bọtịnụ kpakpando na dome humidity .A pụrụ ịkụnye ngwongwo ndị a gbanyere mkpọrọgwụ ozugbo na mkpụrụ ọ bụla na - eto eto. ịzụlite ihe ọkụkụ...
Ihe Ngwongwo nke Infrared maka Moxibustion Apratus
Nkọwapụta ngwaahịa Ihe nkiri a na-ekpo ọkụ bụ imewe maka Moxibustion Ngwa Heating.Good for body's health.
Ngwongwo Mgbasa Mkpụrụ maka Mkpụrụ Germination
Ihe bara uru: 1. Okpomọkụ na gburugburu 10 ° C -20 ° N'ime elu okpomọkụ; nwere ike ibi na ala ọnọdụ okpomọkụ. 2. Efficiency Transfer Heat - Mmiri dome
Nkume Na-ekpo ọkụ maka Mirror efu efu
Nkịtị Na-ekpo ọkụ maka Ihe Nlereanya Nzuzo Mee ka ememe ụtụtụ gị Ihe anyị na-eme, mirror defogger for mirror van is perfect for spouses who share a bathroom in the morning. N'ịbụ onye na-agbaso ihe ngosi efu ahụ, ihe nkiri kpo oku maka enyo nke mirror guzobere nkà na ụzụ ọhụrụ nke na-eme ka enyo na-enweghị ihe ọ...
Ngwongwo Igwe Ngwá Fras Na Na Na Na Na Na Na Ihe mgbochi kpo oku a na-ekpo ọkụ zuru oke zuru oke maka ndị di na nwunye na-eso ụlọ ịsa ahụ na ụtụtụ. Mgbe hunsband na-agbapụ, nwunye nwere ike ịnwe ihe isi ike na-eme ihe etemeete. N'ebe a, anyị na-enye gị ngwọta zuru oke. Ihe mgbochi igwe eletrik anyị na-ewetara gị...
Ngwongwo Ngwongwo nke Infrared nke Na-ahụ Maka Igwe
Nkọwapụta ngwaahịa Ahụike ahụike yiri ka ọ bụ otu n'ime nsogbu kachasị ama maka ndụ oge a. Site na ihe nkiri ikpo ọkụ nke juru ebe niile, ị nwere ike ịmalite ndụ dị mma na otu nzọụkwụ. Ngwongwo Ngwongwo Ngwurugwu Na-adị Nso, nke mejupụtara nkà na ụzụ, nwere ike inye anyị obi ụtọ na ihu igwe oyi. Site na ụlọ nke...
OA Ngwongwo ndi ozo na-akpo
USB Rechargeable ụgbọala mkpanaka # HSD-060 EC & RoHS akwụkwọ 83 (L) x 62 (W) x 19 (H) cm / 32.50`` (L) x 24.50`` (W) x 7.50`` (W) 48 ° C dịka ihe dịka 3hrs / 40 ° C dịka ihe dịka 6hrs Ihe ọ bụla agba na logo mkpa biko gwa m Okwute ụgbọ mmiri USB dị mkpa 4hrs UL, CE, PSE Akwado chaja na-eburu ihe maka ọkụ dị ọkụ...
Nkume Nkịta Nkịta Ngwongwo Nkume Na-ekpocha Nkịta Nkume Ngwakọta Dị Ukwuu Na UL Nkịta Na-ekpuchi Nkịta Ụlọ Nkịta Ụlọ Nkịta Nkume Nkasi Obi Nkasi Ntughari Ịkụcha Nkịtị Petco Kpoo Nkịtị 10 Gallon